Wararka Dibada	Mujaahidiinta Shaam oo dagaallo adag ka wada magaalada Caasimadda ah ee Dimishiq.
Dagaallo adag oo aadna u xoogan ayaa tan iyo shalay waxay ka soconayaan magaalada Dimshiq ee caasimadda dalka Suuriya, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada Mujaahidiinta Suuriya iyo kuwa Nidaamka Mujrimka Bashaar Al-Asad. Dagaalkan oo ay horboodeyso hay’adda Taxriiru-Shaam ayna ka qeyb galayaan jamaacaad kale oo ka howlgala gobolka Dimishiq, ayaa xoogiisa waxa uu ka soconayaa xaafadda Jowbar ee magaalada Dimishiq. ...	Read More »
Ciidamo katirsan Xukuumadda taagta daran ee Yaman oo lagu dilay dalkaas.
Qarax Miino oo u muuqday mid dhulka lagu aasay ayaa lala eegtay kolonyo katirsan ciidamada Xukuumadda taagta daran ee dalka Yaman oo wajaheysa dagaallo adag oo uga imaanaya dhanka Xuuthiyiinta. Qaraxan oo ahaa mid xoogan, islamarkaana si aad loo maqlay ayaa ka dhacay magaalada Ma’irb oo ah caasimadda isla gobolkaas, taas oo caan ku ah wax soo saarka Shidaalka oo ...	Read More »
Ruushka ooo Ciidamo geeyay xuduud beenaadka Masar iyo Liibiya.
Sida ay sheegayaan Saraakiil katirsan dowladda Maraykanka iyo maamulka Masaarida, waxaa dowladda Ruushka ay ciidamo keentay xuduud beenaadka Masar iyo Liibiya. Ciidamadan ayaa ku sugan saldhig dhanka hawada ah oo ay leedahay dowladda Masar, kuna yaala xuduud beenaadka Liibiya iyo Masar. Hadafa ciidamadan ayaa loo maleynayaa taageerida dagaal Ooge Khaliifa Xaftar oo guul darooyin ay kasoo gaarayaan dagaalka ka socoda ...	Read More »
Dowladda Turkiga oo Sheekh dalkeeda ku sugnaa u gacan gelisay dowladda Kazakhistaan.
Maamulka cilmaaniga ee dalka Turkiga ayaa u gacan geliyay dowladda Kazakhistaan Sheykh caan ah oo kasoo jeeda dalkaas, kaas oo ku sugnaa dalka Turkiga. Sheekhan loo gacan geliyay dowladda Kazakhistaan waxaa lagu magacaabaa Sheykh Cabdil Khaliil, waxaana diyaarad laga saaray garoonka Ataatoorik oo ay ku xirnaayeen isaga iyo qoyskiisa inkabadan boqol maalmood oo xiriir ah. Waxaa Sheekha la geeyay dalka ...	Read More »
Dowladda Maraykanka ayaa markii ugu horreysay waxay ka hadashey hay’adda Taxriiru-Shaam oo ah Jamaaco ay ku mideysanyihiin kooxo ka jihaada dalka Suuriya, islamarkaana bilo kahor lagu dhawaaqay. Bayaan kasoo baxay wakiilka Maraykanka u qaabilsan dalka Suuriya Michel Ranti ayaa lagu sheegay in hay’adda Taxriiru-Shaam ay tahay koox Argagxiso ah, islamarkaana xubin ka ah Ururuka Al-Qaacida. Bayaanka oo ku qornaa Luuqadda ...	Read More »
Diraasad: Sujuudda iyo Rukuucda waxay daweeyaann dhabar Xanuunka.
Diraasad cusub oo ay soo saartay majallad ka faalloota Nidaamka farsamada iyo warshadaha ayaa lagu sheegay in dhabar xanuunka ay dareemaan inta badan dadka lagu daweyn karo qaababka Rukuucda iyo Sujuudda haddii lala yimaado qaabka ugu saxan ee Rukuucada iyo Sujuudda. Diraasaddu waxay sheegtay in salaaddu aysan daweyn xanuunada jirka oo kaliya, balse sidoo kale ay dawo wanaagsan u tahay ...	Read More »
Page 2 of 41«12345	»	102030...Last »	GURMADKA ABAARAHA MUDUG TARTANKA MACAAHIDA BAY IYO BAKOOL	Daawo: Al-Ixsaan Iyo Daryeelka Bulshada (Qeybta 4-aad)	https://t.me/RadioAlfurqaan